Tonon Kiran'i Solomona 4 - Baiboly Masina [Malagasy Bible 1865] - (ToSo 4)
Tonon Kiran'i Solomona 4
Endrey, tsara tarehy ianao, ry tompokovavy havako! Endrey, tsara tarehy ianao! Ny masonao dia voromailala eo amin'ny fisalobonanao; Ny volonao dia tahaka ny osy andiany, izay mandriandry eny an-kilan'ny tendrombohitr'i Gileada.[Na: volonao milantolanto]
Tahaka ny kofehy jaky ny molotrao, ary mahafinaritra ny vavanao; Tahaka ny hasin'ampongaben-danitra ny takolakao eo amin'ny fisalobonanao,[Heb. fitenenanao][Na: volonao milantolanto]
Mandra-pangatsiatsiaky ny andro, ka efa hilentika ny masoandro, dia handeha aho ho any amin'ny tendrombohitry ny miora sy ny havoan'ny ditin-kazo mani-pofona.[Heb. mandositra ny aloka]
Tsara avokoa izato bikanao izato, ry tompokovavy havako; Tsy misy kilema ianao.
Hiaraka amiko avy any Libanona ianao, ry ampakariko, eny, hiaraka amiko avy any Libanona, hitazana eny an-tampon'i Amana, eny an-tampon'i Senira sy Hermona, eny an-davaky ny liona, eny an-tendrombohitry ny leoparda.
Efa lasanao ny foko, ry havako ampakariko, efa lasanao ny foko tamin'ny masonao an-ila sy tamin'ny rojo anankiray amin'ny vozonao.[Heb. ampakariko]
Akory ny hatsaran'ny fitiavanao, ry havako ampakariko! Akory ny hatsaran'ny fitiavanao! eny, tsara noho ny divay! Ary ny fofon'ny menaka manitrao dia mihoatra noho ny zava-manitra rehetra! [Heb. ampakariko]
Saha voahidy ny havako ampakariko, loharano voahidy, fantsakan-drano voaisy tombo-kase.[Heb. anabaviko]
Hianao no saha anirian'ny ampongaben-danitra tsara voa, sady misy kofera sy narda,
Eny, narda sy safrona, veromanitra sy havozomanitra sy ny hazo misy ny ditin-kazo mani-pofona rehetra. Miora sy hazo manitra Mbamin'ny zava-manitra tsara rehetra;[Heb. ahalota]
Loharano ao an-tanimboly ianao, loharano miboiboika, ary renirano kely avy any Libanona.Mifohaza, ry rivotra avy any avaratra; avia, ry avy any atsimo, Mitsofa eny an-tsahako hielezan'ny fofony manitra. Aoka ny malalako hankatỳ an-tanimboliny ka hihinana ny voankazony tsara.
Mifohaza, ry rivotra avy any avaratra; avia, ry avy any atsimo, Mitsofa eny an-tsahako hielezan'ny fofony manitra. Aoka ny malalako hankatỳ an-tanimboliny ka hihinana ny voankazony tsara.
Tonon Kiran'i Solomona 4:1
Tonon Kiran'i Solomona 4:2
Tonon Kiran'i Solomona 4:3
Tonon Kiran'i Solomona 4:4
Tonon Kiran'i Solomona 4:5
Tonon Kiran'i Solomona 4:6
Tonon Kiran'i Solomona 4:7
Tonon Kiran'i Solomona 4:8
Tonon Kiran'i Solomona 4:9
Tonon Kiran'i Solomona 4:10
Tonon Kiran'i Solomona 4:11
Tonon Kiran'i Solomona 4:12
Tonon Kiran'i Solomona 4:13
Tonon Kiran'i Solomona 4:14
Tonon Kiran'i Solomona 4:15
Tonon Kiran'i Solomona 4:16